Wood က & သံခြံစည်းရိုး vs ဗီနိုင်း - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » Wood က & သံခြံစည်းရိုး vs ဗီနိုင်း
views:19 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-06 မူလ:ဆိုက်ကို
သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်မွေးမြူရေးခြံ decorating သည့်အခါဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်: အဘယျသို့ပစ္စည်းခြံစည်းရိုးကိုရွေးချယ်သလဲ? သစ်သား, သံ, ဒါမှမဟုတ်ဗီနိုင်း? ဤဆောင်းပါးသည်ငါသင်သည်သင်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, သုံးမျိုးပစ္စည်းများလုပ်ထားတဲ့ခြံစည်းရိုးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလှအပ: ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး> သံအကာ> သစ်သားအကာ
ဒါဟာအားလုံးကိုသင်လိုချင်တဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ သငျသညျဘို့သံ၏ဂန္ကြည့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, သံခြံစည်းရိုးကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ preference ကိုအညီသင့်ရဲ့သစ်သားခြံစည်းရိုးပေါ်ဆေးထိုးခြင်းမှရှေးခယျြနိုငျသညျ, ဒါပေမဲ့ဒီနွမ်းရှောင်ရှားရန်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုထိခိုက်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ သငျသညျသစ်သား၏အသွင်အပြင်တူတဲ့လိုပါကဗီနိုင်းရွေးကောက်သဖြင့်,ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအတွက်ကောင်းတစ်ဦးလျောက်ပတ်သည်နှင့်လည်းညှိုးနွမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ရေရှည်မှာထဲမှာ, သံချေးမည်ထင်း corroded လိမ့်မည်။
တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ: သံအကာ> ဗီနိုင်းအကာ> သစ်သားအကာ
သံဤကဏ္ဍတွင်အနိုင်ရ။ သတ္တုခြောအလေးချိန်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုတွေအများကြီးကိုဆီးတားနိုင်။ သစ်သားပစ္စည်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုအတော်လေးညံ့ဖျင်းနေသည်။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးလည်းကောင်းသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သံ၏ခွန်အားမကိုက်ညီပါဘူး။ သို့သော်နေသမျှကာလပတ်လုံးကအကြမ်းဖက်သက်ရောက်မှုမယ့်အတိုင်း, ဗီနိုင်းပစ္စည်းကိုချိုးဖျက်မည်မဟုတ်, ကသင့်ရဲ့ခြံထဲမှာသို့မဟုတ်မွေးမြူရေးခြံခြံစည်းရိုးများအတွက်သံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ပါပဲ။
သီးသန့်လုံခြုံရေးအဆင့်ကို: ဗီနိုင်းအကာ> သံအကာ> သစ်သားအကာ
ကြာရှည်ခံမှု: ဗီနိုင်းအကာ> သံအကာ> သစ်သားအကာ
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း:သစ်သားအကာ> ဗီနိုင်းအကာ> သံအကာ
သစ်သားခြံစည်းရိုး၏ installation အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တုဗီနိုင်းထက်အများကြီးပိုလေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်တစ်ဦးကိုနူးညံခြေလျင်မှသတ္တုခြံစည်းရိုးရရှိရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအနေအထားအဘို့အဘိလပ်မြေလောင်းပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးများသောအားဖြင့်ဘိလပ်မြေများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ installed ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အမှုကိုပြုရအတော်လေးနည်းနည်းဘိလပ်မြေလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Installing သတ္တုထက်ပိုမိုလွယ်ကူတာဒီထက်စျေးကြီးသတ္တုတပ်ဆင်ခြင်းထက်ဖြစ်ပါတယ်။
စတိုင်အမျိုးအစားများ: ဗီနိုင်းအကာ> သစ်သားအကာ> သံအကာ
သံစတိုင်များအမျိုးမျိုးအတွက်လာပေမယ့်ရွေးချယ်ပစ္စည်းများအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်, သငျသညျကိုစိတ်ကြိုက်ချင်လျှင်, အချိန်စားသုံးခြင်းနှင့်အကုန်အကျနိုင်ပါသည်။ သံခြံစည်းရိုးခွန်အားဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်ထိရောက်တဲ့ကုန်ကျပါဘူး။ အများစုကသတ္တုခြံစည်းရိုး space strips တွေနှင့်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်ထားရှိရေး။ အဲဒီမှာသစ်သားခြံစည်းရိုးများနှင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအများအပြားစတိုင်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဗီနိုင်း ပဌမ ဒုတိယ ပဌမ ပဌမ ဒုတိယ ပဌမ
သံ ဒုတိယ ပဌမ ဒုတိယ ဒုတိယ တတိယ တတိယ
သစ်သား တတိယ တတိယ တတိယ တတိယ ပဌမ ဒုတိယ
Wood ကခြံစည်းရိုး vs ဗီနိုင်း သံခြံစည်းရိုး vs ဗီနိုင်း သံခြံစည်းရိုး vs သစ်သား ဗီနိုင်းများနှင့်သစ်သား & သံခြံစည်းရိုး၏နှိုင်းယှဉ် ဗီနိုင်းများနှင့်သစ်သား & သံခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းများနှင့်သစ်သား & သံခြံစည်းရိုးနှိုင်းယှဉ်